Attractiveness - iray amin'ireo toetra tena manan-danja indrindra amin'ny endriky ny fashionista maoderina. Ary, mazava ho azy, ireo tovovavy marevaka, tanora ary sexy dia mampiseho ny endriny mitovy amin'ny bika aman'endriny miaraka amin'ny fanampian'ny trano fivoahana misokatra. Soa ihany ankehitriny fa ny sisin'ny fahamendrehana dia mihamitombo, ary izay heverina ho maloto sy mahamenatra ankehitriny dia ekena amin'ny fiarahamonina ho toy ny nomena. Ny iray amin'ireo akanjo ireo, izay mamaly ny lamaody farany amin'ny lamaody farany, dia mikrô-mikarakara. Ny modely toy izany dia fohy, efa saika ny antsasaky ny fihodinam-bolo. Azo atao ihany koa ny miaraka amin'ny fatorana ambany. Ny modely sasany dia manokatra na dia ny taolam-bera ihany aza.
Ny toeran'ny mikrôby vavy dia aseho amin'ny fisafidianana lehibe. Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny modely fohy dia fomba sy fitaovana. Ny malaza indrindra, natao ho an'ny akanjo isan'andro dia denim micro-shorts. Mpanakanto maro no manao akanjo toy izany amin'ny jeans taloha, fa azo atao kosa ny manamboatra vahaolana efa vita. Manolotra fanatanjahan-tena koa ny micro-shorts. Matetika, ny modelim-pitaovan'ny elastika dia natao ho an'ny Pole Dance and Strip Dance. Ankoatr'izay, afaka manantitrantitra ny maha-lahy sy ny maha-vavy anao miaraka amin'ny fanampian'ny vokatra vita amin'ny hoditra.
Mikarakara tsara ny endriky ny kiraro mozika Kazehal. Ny safidy fohy, shirt-wrestling , T-shirt malalaka dia safidy manintona. Amin'ity tranga ity, ny kiraro dia mety amin'ny endriny eny an-dalambe sy ny klasika. Kely fohy mitovitovy amin'ny akanjo lava tsara tarehy miaraka amin'ny akanjo mamirapiratra mamirapiratra - kofehy rongony, akanjo manga sy ny hafa. Ny tsy hita sy ny voalohany, ny modely bitika dia hameno ny sary amin'ny pantyhose sy ny pantyhose mivantana miaraka amin'ny fitahirizana imailaka. Ary koa ny vahaolana lamaody dia henjana matevina na kiraro, kiraro sy kapa eny amin'ny lampihazo na kiraro avo, kitapo mini-pahefana na clutch.
Sarafan-tsakafo mafana ho an'ny vehivavy matavy
Mivadika am-paty miaraka amin'ny lelafo
Lifshack: ahoana no hividianana bras ao anaty aterineto
Vehivavy kiraro sweety
Kiraro ho an'ny vehivavy bevohoka amin'ny lohataona
Jeans lehibe - sary 60 sarimihetsika mampiavaka ny fotoana rehetra
Vehivavy mafana fo
Borosy mena - toeram-pitsaboana ho an'ny vehivavy
Mayonnaise tsy misy atody ao an-trano
Kisoa miaraka amin'ny anana
Vokatry ny firaisana ara-nofo
Fanondroana vatana amin'ny zaza
Kamboty amin'ny ronono
Sakafo Goat - tsara sy ratsy
Ny tsy fahampian-tsakafo oviana - Ny soritr'aretina
Ny latabatry ny Taom-baovao tamin'ny taonan'ny dragona
Salady misy voankazo mamy sy kôkômbia
Mamafy amin'ny lakandrano mihetsiketsika
Soup Suisse miaraka amin'ny fofona
Mirotsaka amin'ny orona
Tetezana akoholahy mangatsiaka